musha nyika dzakabatana Singers DaBaby Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheDaBaby Yehudiki Nyaya, Biography, Chokwadi Chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, musikana / mukadzi chokwadi, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika paakazozivikanwa kwazvo.
Hupenyu nekusimuka kweDaBaby. Mufananidzo: Rap-Up, Hiphopoverload, Hiphopwired, uye Bossip.
Ehe, iwe neni tinoziva iye mumwe we akanakisa rappers nyowani muUS. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga DaBaby's biography yatakagadzira uye inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
DaBaby Yehudiki Nyaya:
DaBaby Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. Mufananidzo: Rap-up.
Kutanga, zita chairo raDaBaby ndiJonathan Lyndale Kirk. Iye akazvarwa pazuva re22nd raDecember 1991 muCleveland, Ohio. DaBaby ndiye wekupedzisira pavana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa pakati pababa vake naamai vake.
Muimbi akapedza makore mashanu ekutanga ehudiki hwake muOhio. Pakutanga pahucheche hwake (pazera ramakore matanhatu), vabereki vaDaBaby vakatama kubva kwaakaberekerwa vachienda kuCharlotte, North Carolina. Kusiya Ohio kwaireva kurega shamwari dzake dzese dzehudiki uye vaaizivana navo.
Chokwadi ruzivo rwake rwekubva munzvimbo yekuzvarwa kwake rwakamukuvadza sezvo aifanira kujairana nemararamiro ekwaanogara muCharlotte.
DaBaby Yemhuri Mhemberero:
DaBaby akaberekerwa mumhuri ine musoro (baba vake) vaifarira dzidzo. Mumwe munhu angatarisa kwaakabva kuti kwakabuda mumhuri yekudzidzira mhuri. Zvisineyi, DaBaby ndeweAmerican nyika uye ane Afro-American dzinza iro rinoonekera mukujeka ganda rake. Izvi zvaigona kutsanangura kwaakabva Nigerian?
DaBaby Hupenyu hwepakutanga:
Nguva pfupi yapfuura mhuri yaDababy yabva muOhio, wechidiki uyu akazviona achizadzwa nehupenyu hwakaomarara hwemugwagwa. Aive nenguva yakaoma kuenderana nemararamiro emigwagwa asi akaedza zvakaoma kuti ave nechokwadi chekupona kwake muhupenyu hwake hwepakutanga.
Kukura mumigwagwa, DaBaby nekudaro yaive ne-run-ins pamwe nemutemo uye yakagadzira rekodhi rekodhi pamusoro pemakore. Muimbi akasungwa pazviitiko zvakasiyana siyana zvemhosva dzakasiyana kubva pakutyaira aine rezinesi rekutyaira rakabviswa kusvika pakubata mbanje zvisiri pamutemo.
Nekufamba kwenguva, DaBaby akasvika pakunzwisisa kurwadziwa kwakatarisana nevasina rombo-rombo-vanhu vaifanira kutendeukira kumhosva dzavaipara kuti vawane mukana.
Akachengetedzwa nemapurisa uye akabvunzwa nezvembavha.
DaBaby yakave yakatsunga kubatsira vanhu avo vaishungurudzika zvakanyanya nemumhanyi mukutsvaga chingwa chavo chezuva nezuva uye vakanzwa kuti aigona kuzviita nekupinda mumimhanzi. Nekudaro, muimbi wacho aisakwanisa kusvetuka zvizere mukunyora manotsi sezvo iye aifanira kutarisana nekutsvaga kwake kwekudzidza kwechinguva chiripo.
Zvichakadaro, kunetseka kwemhuri yaDaBaby yedzidzo kwaive kwakasimba zvekuti muimbi akange asina imwe sarudzo kunze kwekunyoresa kuVance High School kwaakapedza mugore ra2010. Akaenderera mberi nekudzidza paUniversity yeNorth Carolina kuGreensboro.
Makore maviri muchidzidzo chake paUniversity, DaBaby akasiya chikoro aine chivimbo chakazara chekupinda basa rekuimba. Muimbi ari kuuya akazivisa kuti aingoenda kuchikoro nekuda kwedambudziko revabereki vake.
Akanyatso kubuda muUniversity, achisiya nzvimbo dzakanaka kudaro zveramangwana rakanaka mumimhanzi.
DaBaby Yekutanga Basa:
Kugamuchirwa kwevabereki vaDaBaby nezvechisarudzo chake chekusiya chikoro kwakamusiya aine chinhu chimwe- Kuti kuvimba kwake pasina basa rakaomarara kwaizongounza kufunga kwekushuvira. DaBaby akanzwisisa chirevo ichi uye akasvetukira mukuita zvizere nekutora makore maviri ekutanga mushure mekudonha kwake kuti azvigadzirire zvakanaka kwazvo kuputika muindasitiri yevaraidzo.
Basa rekutanga rebasa raDaBaby raive kuburitswa kwake kwekutanga mixtape, - Nonfiction - mugore ra2015. Kunyangwe iyo mixtape isina kuwana mukurumbira wakawanda, DaBaby yakaramba ichiburitsa mamwe matraki.
DaBaby's kutanga mixtape kavha. Mufananidzo wechikwereti: Genius.
DaBaby Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Chimwe chezvipingamupinyi zvekutanga zvakatarisana nemuimbi ane mukurumbira chiitiko chekusarudza pazita rezita. Pakutanga, DaBaby yakange yatora zita rekuti "Mwana Jesu" iro raakazofunga serekusina chitendero. Iye, saka, akachinja zita rekuti DaBaby rakazove rake zita rehunyanzvi mune rake basa. Mazita ake chaiwo "Jonathan Lyndale Kirk" haana kuonekwa senge sarudzo.
DaBaby akaona kuti zita rake rekuti zita raive risina kukwana kuti vamukurudzire kusvika pakubudirira kwekubudirira kwaanoshuvira muindasitiri yemumhanzi. Aifanira kushanda mamwe mamaira kuti ave nechokwadi chekuti akawana mukurumbira mukurusa pabasa rake. Zita rake rakatanga kuratidza zviratidzo zvekuzeya pasi rese sezvaakatora danho rakakura kusaina kuna Arnold Taylor, South Coast Music Group label.
Arnold Taylor (L) akaita basa rakakosha mumugwagwa weDaBaby unoenda mukurumbira.
Nongedzo huru mukati DaBaby's biography ndipo paakasayina chibvumirano chekurarama kwenguva pfupi Jay-Z's Roc Nyika kune yake Blank Blank mixtape iyo yakaburitswa muna 2018.
DaBaby Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Iye muimbi akaoma munguva pfupi akatanga kunyora kwake kunzi Billion Dollar Yevana Varaidzo. Ndichiri kuchengeta chibvumirano chake neInterscope, akaburitsa dambarefu rake rekuti - Mucheche paMucheche - pazuva rekutanga kwaKurume 1.Dambarefu rake kekutanga rakarova nhamba 2019 paBillboard 25 maalbum muUS. Ichi chaive chimwe chezvinhu zvikuru zveDababy's biography, imwe yaasinga kanganwe nekukurumidza.
Chikamu cheaDaBaby's biography isingambokanganwi ndeye yake yekutanga studio album - mucheche pamwana - chivharo. Mufananidzo: Stereogum.
DaBaby yakakurumidza kuburitswa pabutiro reXLL's Freshman Kirasi ya2009. Akave akaverengerwawo pane dzinoverengeka dzimwe nziyo dzakarova nevaimbi vakasiyana kusanganisira Post Malone, Camila Cabello, naMegan Thee Stallion kubva paakasimuka mukurumbira.
Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti 2019 chaive kuputika kwakabudirira kweDaBaby sezvo akavhara gore riine zvinyorwa zvakawanda (22) pane Billboard Hott 100.
Zvakare poindi yekucherechedza mune ino biography, muimbi wechidiki akagashirawo mazita maviri, ese eakaroorwa asina kuroorwa - Suge - mumakumi matanhatu nematanhatu yeGrammy Awards yakaitwa mugore ra62.
DaBaby akaisa Nicky Minaj mu track rake izvo zvakamuwanira zita rekusarudzwa mu 62 Grammy Awards. Mufananidzo: Illuminaija
Kunyangwe mukomana wechidiki anga awanda mari yakawandisa, iye achiri neanogonesa kuita machira ake kuti afadze nyika nawo. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ndiani musikana waDaBaby?
Hupenyu hwehukama hwemurapi weAmerica hwave hunonakidza kwazvo. Muchikamu chino, tichagovana newe ruzivo rwehupenyu hwerudo hwaDaBaby.
Kutanga uye pamberi pezvese, Dababy akange ave muhukama hwekudanana nemusikana wake akatendeuka mwana wamai uyo anoenda nezita rekuti MeMe. Shiri mbiri dzerudo dzakatanga kufambidzana zviri pamutemo zvichitevera kubata kwaMeMe kumurapi weAmerica.
DaBaby munguva pfupi yakazova baba vevaviri uye vakatora basa ravo rababa kuvana vavo vaviri - mwanasikana wavo wekutanga kubva pahukama hwavo uye mwanakomana weMeMe kubva kuhukama hwake hwekare. Kunyangwe shiri mbiri dzerudo dzisati dzaroora, asi ivo vari kutarisira mwana wavo wechitatu pamwechete panguva yekunyora.
Kuonekwa kwake kunofadza nemwana wake amai nevana kunoratidza kuti ndibaba vakanaka.
DaBaby akapomerwa mhosva yekubiridzira musikana wake kakawanda. Kutanga, akapomedzerwa kubiridzira MeMe pamwe neanonzi tenzikadzi wake, Latoia Danet.
Chechipiri, iye akarumwa kuti akange akaroora Ashley Kirk, uye chechitatu, iye aive nerudo akabatana nemuimbi Jessie Reyez.
Kupindura kune zvese izvi zvekunyepedzera pa Instagram, DaBaby akanyatsoramba kuti anodanana nevakadzi vambotaurwa vanorega kuroora chero munhu wavo.
DaBaby's High Chikoro bhuku rebhuku rakasimudza runyerekupe rwekuti akaroora Ashley Kirk. Mufananidzo: Hiphopoverload.
DaBaby Hupenyu Hwemhuri:
Muimbi wekuAmerica aigara achitaura nezvehupenyu hwemhuri yake. Kunyange zvakadaro, isu tinokupa iwe neruzivo runonyanya kufadza nezve nhengo yega yega yemhuri yake kutanga nevabereki vake pazasi.
Nezve Vabereki vaDaBaby:
Baba naamai vaDaBaby vaida kuona kuti vana vavo vanonakidzwa nehupenyu zvizere.
Kufanana nevamwe vabereki vazhinji, vakashanda nesimba kuona kuti mwanakomana wavo awana dzidzo yepamutemo iyo yaizomubatsira kutora basa rehunyanzvi mune ramangwana riri padyo. Kunyangwe ivo vavariro yavo yeDaBaby yaive yakanaka, iye, zvakadaro, akasiya chikoro kuti aite basa rekubvarura.
Vabereki vake vaive nehanya kwazvo nedzidzo yake.
Nezve hama dzaDaBaby:
Iyo mudiki rapper ine vakuru vaviri hama uye haina hanzvadzi. Kunyangwe akachiita yakakura muindasitiri yekuzvivaraidza, haana kuendesa chero pasocial media platform kunoburitsa kuzivikanwa kwehama dzake. Zvakakoshawo kufunga kuti DaBaby anogona kunge ainewo vana nababamunini vakazvarwa nevakoma vake vakuru avo nyika ichiri kuzonzwa nezvayo.
About DaBaby's hama (s) - Ane Nigerian Midzi here?
Zvave zvichiramba zvichitsanangurwa kuti madzitateguru eRapper kazhinji emidzi yeNigeria. Nhoroondo yababa vake nasekuru nanamai vake inoda kutevedzwa kuti vaone chokwadi chekupokana uku.
Zvakare, DaBaby haina kumbobvira yaziva chero munhu sababamunini vake kana tete munzira yekuita chero fomu yekubvunzurudza.
DaBaby Hupenyu hweMunhu:
Ndiani DaBaby? Chii chinoita kuti afare? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, DaBaby's persona isanganiswa yeCapricorn zodiac maitiro. Iyo rapper inoshanda, ndeyechokwadi, uye ine chinzvimbo, hunhu hunokodzera hunhu hwake hwezodhiac.
Chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekuenda mumimhanzi sezvakataurwa nemurapi weAmerica kubatsira vanhu. Nekudaro, DaBaby zvakare ine yakasarudzika nzira yekushambadzira nziyo dzake. Kunze kwekubvarura, DaBaby yakaverengerwa semunhu anozvininipisa kushambadza shasha uye dzimwe nguva, mukomana wemombe. Waizviziva here?… DaBaby yakamboonekwa paSXSW mumachira.
Zvakare pahupenyu hwake hwega, DaBaby haawanzo kutaura nezvezvinhu zvaanozeza. Kunyange zvakadaro, anowanzo pfeka bhuruu charlotte jersey mune mamwe mimhanzi yake. Basketball rake rekufuka chiratidzo chekuti muvhara rapper uyu anofarira zvikuru mutambo. Ndosaka LeBron James Akava mumwe wevateveri vake vakakura pasina imwe nguva iri kure.
Anoda akapfeka yebhuruu rake reCharlotte jersey. Snapshot: Bhodhi.
Rapper iyi haina kungowana mukurumbira uye mukurumbira muindasitiri yemimhanzi, asi zvakare awedzera hupfumi hwakawanda hwani.
DaBaby ine mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 5 miriyoni panguva yekuisa iyi Biography. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuedza kwake kwemimhanzi apo ongororo yemashandisiro ake inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kusiyana nevamwe vazhinji vakakurumbira, DaBaby haagumbise imba yake yakasarudzika pane internet. Akaramba achireva mazwi ake ekubatsira vanhu kuburikidza nemimhanzi uye akatengawo timu yake yese mota idzva dzinoratidzwa pazasi.
Chiito cherudo! Tarisa uone mota nyowani dzakatengwa neyekare murapi kune ese mitezo yechikwata chake.
Dababy ane yake yega Jet?
Rapper aifungidzirwa kunge akatenga yake yega jeti. Humbowo hweichi chirevo chakazviratidza mune mamwe emimhanzi mavhidhiyo ayo akafuridzirwa paanofungidzirwa ega jeti. Nekudaro, mamwe masosi enhau akatenda kuti akakweretesa zvakavanzika kuti apfure mimhanzi yake mavhidhiyo. Tarisa uone jeti rakavanzika raDaBaby pazasi.
Iyo yakavanzika jet (kumashure) yakashandiswa kugadzirwa kwemimhanzi vhidhiyo - Goin Mucheche. Mufananidzo: Lab.
Kuputira yedu DaBaby yehucheche nyaya uye biography, heano zvimwe zvishoma-anozivikanwa chokwadi icho chinokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wehunhu hwake.
Chokwadi # 1: Idols ake uye Childhood zvinokurudzira:
DaBaby haana kungokanganisa nenzira yakasviba kupinda mune riking panguva yebasa rake remimhanzi. Pakutanga, akakura achiteerera kune mimhanzi ye rap Kucho, 50 muzana, uye Lil Wayne. Chimiro chavo chemimhanzi chakanyatsochinja maitiro emimhanzi yeDaBaby.
Chokwadi # 2: DaBaby's 2018 inomhanya-nemutemo
DaBaby akambobatanidzwa muchiitiko chine njodzi chakatungamira kurufu rwemwana ane makore 19 kuNorth Carolina Walmart. Zvino ngatitaurire iwe kuti zvakaitika sei.
Nechokunopera kwa 2018, DaBaby aive achitenga nemwanasikana wake wegore rimwe, MeMe nemwanakomana wake ane makore mashanu kubva paukama hwapfuura apo mukomana wemakore 19 akangoerekana amurwisa. DaBaby akaita seakazvidzivirira akapfura mukomana wechidiki panzvimbo chaipo. Pasina nguva iri kure, mhosva dzese dzavaipomerwa dzakazobviswa.
Chokwadi # 3: DaBaby muNigerian here?
Mhedzisiro yakawanda yekukakavara yakaitwa nezve iyo chaiyo mabviro emhare veteran. DaBaby akatora ku Instagram kuti agovane mimwe mifananidzo yake akapfeka nhumbi dzeNigerian.
Akange akapfeka chipfeko chechinyakare uku achiremekedza kukokwa kwemuchato weimwe yeshamwari dzake dzekuNigeria. Mufananidzo uri pazasi unopa unogutsa mufananidzo waDaBaby seNigerian chaiye.
Chipfeko chake chakamuburitsa pakati pevamwe vakati wandei. Mufananidzo: Trendsmap.
Chokwadi # 4: DaBaby's Tattoos
DaBaby anowanzo kuputa uye kunwa. Haana kusiiwa kunze munyika ye tattoo sezvo iye akaisa akati wandei ma tattoo emuviri wake.
Mamwe emateti ake anosanganisira; ChiLatin chinoti "Carpe diem" chakanyorwa pamaoko ake, izwi rekuti "ichokwadi" rakanyorwa pamunwe woruoko rwake rworuboshwe, chinyorwa chikuru chakanzi "BHUKU" chakashongedzwa pabendekete rake runyorwa uye chirevo "Hakuna chombo chakagadzirirwa kurwisa ini chichagona kubudirira" chakanyorwa pahuma yake yekurudyi.
Tarisa !!! Muviri wake uzere nematatoo. Photography: Pinterest.
Zita Chairo: Jonathan Lyndale Kirk
Zita rekudanwa: "DaBaby", "Mwana Jesu" nezvimwe.
Akazvarwa: December 22, 1991
Vanun'una: Vakuru vaviri mukoma uye hapana hanzvadzi
Mhuri Kubva: Charlotte, North Carolina
Mhuri Roots: Africa
Basa: Rapper uye munyori wenziyo
kukwirira: Makubhiti mashanu nemasendimita akareba
Weight: 75 kg (mune Kilogiramu) uye 165.35 lbs (muPound).
Dababy's Wiki Dhata
Thanks for reading nyaya yedu paDaBaby. Zvakawanda zvakadaro, kutenda mazviri Zvatiri uye Zvatinoita. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!